प्रदेश बिभाजनपक्षधर एकातिर हामी एकातिर— शिवराज सुवेदी,बुटवल एमाले:lumbinireview
प्रमुख पदका उम्मेदवार नेकपा एमाले ः बुटवल
कहा पुग्यो चुनावको तयारी ? कस्तो छ माहौल ?
सुवेदी—आफ्ना प्रतिवद्धतासहित जनताका घरघरमा जाने काम भइरहेको छ । उम्मेदवारी दर्तापछि झन् राम्रो माहौल बनी रहेको छ । छ हजार पार्टी सदस्यहरु र दश हजार जनसंगठनका सदस्यहरु सहित शुभेच्छुकहरुको ठूलो पंक्ति चुनाव प्रचारमा छ । अहिले हेलिकप्टरबाट हेर्ने हो भने तपाइ“ बुटवल एमालेमय देख्नुहुन्छ । यस्तो पो छ त ।
सबैले जितेपछि यसो गर्छु उसो गर्छु भन्छन् । क्या मीठा आश्वासन दिन्छन् । भन्नुस् त तपाईले जित्नु भो भने खास के गर्नुहुनेछ ?
पहिलो कुरो—जित्ने बित्तिकै बुटवल उपमहानगरपालिकाका जनताले सुशासन पाउनु हुनेछ । शासकको शैलीमा हैन सेवकको शैलीमा । यहा“का अव्यवस्थित बसोवासी र असुरक्षित ठाउ“मा रहनु भएकाहरुलाई सुरक्षीत स्थानान्तरण र वैकल्पिक व्यवथा गरिनेछ । बसेको ठाउ“को स्वामित्व प्राप्त गर्नु हुनेछ । मालिक बन्नु हुनेछ । तेस्रो—अभिसाप भनिएको दानव र तिनाउलाई वरदानमा परिणत गर्न काम शुरु भैसकेको छ । बुटवलमा कम्तिमा एक वार्ड एक पार्क, एक वार्ड एक वृद्ध मिलन केन्द्र, एक वार्ड एक शिशु स्याहार केन्द्र बनाइने छ । शिक्षा,स्वास्थ्य रोजगारका क्षेत्रमा ऐतिहासिक काम हुनेछ । भौतिक र मानवीय विकास संगसंगै अघि बढाईने छ । नगरभित्र निशुल्क एम्बुलेन्स चल्ने छ । मोतीपुर र सेमलार स्याटेलाइट सिटीका रुपमा परिणत हुनेछन् । वृद्धभत्ता मासिक ५ हजार पुग्ने छ ।
श्रोत नि श्रोत ?
खर्च गर्ने क्षमताको विकास गर्ने हो नि । नेपालमा खर्च गर्न नसक्ने समस्या छ । पा“च वर्षमा सुशासन सहितको सफा, मानवीय र भौतिक रुपमा हेर्न लायक सहर बनाइन्छ । अर्को पा“च वर्षमा त नेपालको एक नम्बर सहर हुन्छ । अर्को पा“च वर्षमा विश्वका सहरहरुमध्ये सुबिधायुक्त, आयस्तर माथि उठेको सहर बनाउछौं । यो असंभव छैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री र बिष्णु पौडेल हुदा यस्तो खाका प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ ।
बाफरे ! यति महत्वाकांक्षी सपना ? भाषणमा ? प्रतिवद्धता पत्रमा ? सबले रेकर्ड गरेकाछन्,प्रमाण राखेका छन् । भोलि जित्नु भो र केही गर्न सक्नु भएन भने के होला ?
इमान्दारिपूर्क गुरुयोजना बनाएर काम गरिन्छ । कहिले कहा के काम गर्ने भनेर वार्ड वार्डमा होर्डि¨ बोर्ड राखिन्छ । संभव छ । तर अधिकार र कर्तब्य बीचको सन्तुलन जरुरी छ । मानवीय विकास र भौतिक विकास बीच सन्तुलन जरुरी छ । यो भन्दा पनि धेरै कुरा पनि सम्भव छ । कालीगण्डकीको पानी ल्याउने कुरा गर्दा मान्छेहरु खिल्ली उडाउ“थे । अहिले काम अघि बढिसक्यो । केपी ओली पा“च वर्ष प्रधानमन्त्री भएको भए लुम्बिनीमा रेल आउ“थ्यो ।
तपाइ“हरु कस्ता डरलाग्दो कुरा गर्नु हुन्छ है ? एमाले हार्यो भने प्रदेश टुक्रिन्छ,राजधानी बन्दैन,महानगर पनि हुन सक्दैन रे ! मतदाताहरुलाई तर्साउन र भोट तान्न यसो भनिरहनु भएको हो ?
मतदाताहरुलाई तर्साउन होइन सचेत बनाउन भनेको हो । सत्य कुरा नै यही हो । बुटवल प्रदेशको राजधानी भएन भने बुटवलको विकास अवरुद्ध हुन्छ । अनि प्रदेश विभाजन गर्न को को लागेकाथिए भन्ने त सबैलाई थाहा छ नि । चुनावमा बिभाजनकारी एकातिर हामी एकातिर छौं । अर्को कुरा प्रदेशको केन्द्र नबनी महानगर कसरी बन्छ ?लुम्बिनीलाई केन्द्र मान्न सबै जिल्ला तयार छन् । यस्तो वातावरण बिगार्न खोज्नेहरुलाई जनमत जान्न । अब त अधिकार सम्पन्न संवैधानिक स्थानीय सरकार हो, पहिले जस्तै स्थानीय निकाय हो र मन्त्री परिषदले तलमाथि गर्ने ? हामीले जिते टुक्रिन दिन्ना“ै । अरुले जिते त हस्ताक्षर गरेर बुझाइ दिनेछन् । यो पचास सय वर्षको महत्व राख्ने चुनाव हो पा“च वर्षको होइन ।
कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ? जितेसके जस्तो ! जित्ने ग्यारेण्टी के छ र ?
हाम्रो जीत भईसक्यो । कतिको फरक भन्ने मात्र हो । म त जनताको घरघरमा गाछु नि । सबै थाहा छ । उहाहरु सूर्यमा भोट दिने दिन गन्नुभाछ ।
तपाई विरुद्ध कति छन् भन्ने थाहा छ ? तीन तीन पार्टी ।
हिजो कुरा सुनाउ“छु । ती साथीहरु समूहमा भोट माग्न जानुभएछ । यौटाले रुखमा भोट माग्नु भएछ । अर्कोले हसिया हथौडामा । अर्कोले घरमा । मतदाता त अलमलमा पर्नुभएछ । म ढुक्क छु—उहाहरुको मोर्चाबन्दीले केही फरक पर्दैन । म ३५—४० वर्ष यहांका जनतासगै छु । जनताको मनोविज्ञान राम्ररी बुझेको छु । जनताले आफ्नो भविष्य बिगार्ने गरी अन्यत्र मतदान गर्दैनन् । यो कुरामा म ढुक्क छु ।